G/W/S/020/03 London, 07/07/2003
Ujeedo: Wax la aqbali karo ma aha......................
Xaalad la aqbali karayo maaha heshiiskii maalintii shalay ay gaareen madax siyaasadeed ee ka qeyb galeysa shirka duleedka magaalada Nairobi, Kenya, uga socda dagaal oogayaasha Soomaaliya.
Waxaa wax lala yaabo ah in kuwii sababta u ahaa burburka maanta Soomaaliya ku dhacay, hadana u ololeynaya in iyagu ay noqdaan xubnaha baarlamanka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
351 Xubno baarlamaan gaayaya waxay ku xiran tahay baahida shacbigu u qabaan in ay madaxdoodu u adeegaan iyo tirada dadka degan Jamhuuriyadda ay matalayaan, waxaase is weydiin mudan tiro intaa la leg waxa ay ula jeedaan, ma waxay moodayaan in dambiyadii xagga bini'aadanimada ay galeen darteed ka mid noqoshada xubin baarlamaan in ay ku badbaadayaan, xaggeese looga keenayaa dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa howlaha ay qabanayaan, Sida Gaadiidka, Qalabka xafiisyada, Isgaarsiinta, iyo Mushaharooyinkii la siin lahaa IWM.
Waxaanse xusuusinaynaa mudanayaasha doonaya in ay is doortaan halka uu maanta ku sugan yahay xaalka Madaxweyne Jarles Tailor-ka Leyberiya iyo cid kasta oo xad gudub xuquuqda aadamiga geysatay in maalin uun la soo hor taagi doono caddaaladda.
Waxaa naxdin iyo wel-wel soo kordhaya nagu hayay in Soomaaliya la qeybiyo ama laga hirgaliyo nidaam federaali ah kaas oo aan horay uga dignay qatartiisa, hadaba nooma muuqaneyso in aan taageerno isla markaasna horseed ka noqono in Soomaaliya la mariyo waddo ay in badan u doonayeen cadowga.
Wadamada reer yurub waxay ku guuleysteen in ay xagga Siyaasadda, Difaaca, Lacagta iyo arrimaha bulshada ka midoobaan isla markaa iyagoo ku kala duwan Diimaha, Afafka, Lacagaha iyo horumarka xagga dhaqaalaha ay ka gaareen.
Dib u fiiri midnimadii labadii Jarmal ee Bariga iyo Galbeedka, midnimadii labadii Yeman ee Waqooyiga iyo Koofurta iyo wadahadllada lagu doonayo ama looga wada hadlayo midnimada labada dal ee Waqooyiga iyo Koofurta Kuuriya.
Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu si cad u diidayaa in Jamhuuriyadda Soomaaliya laga dhaqan galiyo nidaam federaali ah kaas oo lagu qeybinayo shacbiga Soomaaliyeed.
Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu isla markaa diidayaa 351 xubno baarlamaan oo ay Soomaaliya yeelato anaga oo qadarineyna tirada dadka Soomaaliyeed iyo baahida shacbigeenu u qabaan in aan si caddaalad ahi ugu adeegno.
Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay in Soomaalidu ay Dooneyso Caddaalad iyo Sinaan, taas oo aan waligood madaxdoodu ugu adeegin, isla markaasna kama dambeystii deeqi karta shacbiga Soomaaliyeed.
Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu shacbiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u soo jeedinayaa in ay sameeyaan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dibinbaadyada lagu heshiiyay, cod isku mid ahna ku doonaan mar kale iyagoo ilaalinaya midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Cambaarayn Dilkii Loo Geystey Dr. Xuseen M. Nuur
Qoraal kasoo baxay ururuka wadatashiga Soomaaliyeed ayaa.. GUJI...